musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mutsvene Lucia Breaking News » Urarame Izvo: Saint Lucia anowedzera chirongwa chayo chakareba chekugara
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Saint Lucia inokoka vashanyi kuti vararame senzvimbo ine nyowani-yekupinda yakawanda kusvika gore rimwe sarudzo.
Saint Lucia Tourism inosvitsa sarudzo nyowani kuchirongwa chekugara chakawedzerwa.
Saint Lucia iri kukurudzira vafambi kuti vanyure mune tsika dzemuno.
Sarudza Lucia's Rarama iyo sarudzo sarudzo dzinokodzera zvinodiwa nemhuri, vashandi vari kure, zviuru zvemamirioni uye vangangoita vese vafambi.
Saint Lucia Tourism Authority yakaunza sarudzo nyowani kune yakawedzerwa kugara Live iyo chirongwa, mukupindura mafambiro mafambiro uye kudiwa kwevatengi. Vashanyi ikozvino vanogona kukumbundira hupenyu hweChitsuwa muSanta Lucia neakawanda ekupinda vhiza kwegore rimwe chete. Kubudikidza nesarudzo mbiri dzeRarama iyo chirongwa, Saint Lucia ari kukurudzira vafambi kuti vanyure mune tsika yemuno, nepo vachiongorora kunaka kwekuenda kwekugara pazororo rakareba rekugara kana kushanda kure kure nyore.
Saint Lucia's Live iyo chirongwa chakaunzwa kutanga kwa2021 kwekushanya kusvika kumavhiki matanhatu. Kune avo vanotsvaga sarudzo yekushanya kwakawanda kwehurefu hwese, chikamu chechipiri cheRararama chirongwa ichi chinobvumidza vanyoreri kugara kwegore rimwe vaine vhiza yekupinda yakawanda. pamutengo weUS $ 75.
Saint Lucia Tourism Chiremera's Rarama icho chirongwa sarudzo dzinoenderana nezvinodiwa nemhuri, vashandi vari kure, zviuru zvemireniyoni uye nezve vese vafambi. Vashanyi vanogona kuzvimiririra kuronga kwavo kwavo kushanyirwa, kana rwendo rwavo runogona kuverengerwa uye kugadziridzwa nevakazvipira Live It nyanzvi dzinogadzira bespoke ruzivo rwekushanda, kutamba, kurara uye kudya neyakareruka yeakazvitsaurira emunharaunda concierge.
Ndichiri muSanta Lucia, vashanyi vanogona kushanda vari kure vakasununguka uye vakavimbika, semahara Wi-fi inopihwa kuyambuka chitsuwa ichi kumahotera, dzimba dzekugara, uye nzvimbo dzeveruzhinji. Mahotera mazhinji atove kupa ekure zvekushandisa zvekushandisa uye zvakasarudzika zviwanikwa izvo zvinoita kuti basa uye zororo zviyero zvisina musono. Vanyoreri vanogona kusarudza kubva pamaviri sarudzo dzechokwadi chaicho chiitiko:
Yakagadzirirwa-Yakagadzirwa Chiitiko: Zvakanyatso tariswa neRarama iyo Island Nyanzvi, hapana kushanya kuviri kwakafanana! Iyo inonyudza chirongwa chinopa vashanyi nzira kubva yakarohwa nzira yekufamba kuti vaongorore nzvimbo dzaSanta Lucia uye zvinokwezva zvakachengeteka vese vachiri kurarama senge vemo. Kushanda neLive it Island Nyanzvi dzinosanganisira Barefoot Mahoridhe, Serenity Vacations & Tours uye St. James Travel & Tours, vashanyi vanogona kugadzirisa yavo pachavo nzira kuti vakwane zvavanoda uye zvavanofarira.
Urarame zvakasununguka: Vanyoreri vanogona kunyorera zvakananga kuImigration Dhipatimendi kune akawanda-ekupinda vhiza kwegore rimwe chete nekuzadza Saint Lucia Chikumbiro Fomu kanenge (2) mavhiki pasati pasvika zuva rekufamba. Vanyoreri vanozoziviswa mukati memazuva mashanu kana chikumbiro chabvumidzwa netsamba yekubvumidzwa kwenguva pfupi. Mari yevisa inobhadharwa kunhandare yendege kana wasvika kuSanta Lucia, pamwe nekopi yakadhindwa yetsamba yekubvumidzwa, kuti iendeswe kune mukuru wemaitiro.